Izvi ndizvo zvese Windows 10 keyboard mapfupi aunoda kuziva
January 12, 2022 by Martin6
Kune ruzhinji rwevanhu, kushandisa komputa ine keyboard uye mbeva ndiyo yakajairika nzira yekuita izvi. Ndiwo magadzirirwo mazhinji emakomputa emazuva ano kuti ashandiswe, uye kazhinji anogona kuve anonzwisisika. Kushandisa mbeva kunoita kuti uone zviri nyore nekunongedza zvinhu zvauri kuda kudzvanya, kuvhura, kana kufambisa, kuitira kuti chero munhu agone kuinhonga onzwisisa kuti inoshanda sei. Asi kune vashandisi vane hunyanzvi, iyo keyboard yega inogona dzimwe nguva kuve chishandiso chine simba. Mugwaro iri, tinokuratidza ese mapfupi ekhibhodi aunogona kushandisa mairi Windows 10 kuti zvinhu zviitwe nekukurumidza.
Pane zvakawanda zvaunogona kuita nekhibhodi chete yaungasaziva nezvayo. Kunyangwe chiri chinhu chiri nyore sekukopa mameseji kuvhura maapuro uye mamwe maficha, unogona kuzviwana uchishandisa kiibhodhi yako zvakanyanya mushure mekuverenga gwara iri.
Madimburiko ekibhodhi e Windows 10 maitiro uye maapplication
Unogona kuziva iyo Windows kiyi pakiibhodhi yako yekuvhura menyu Yekutanga mumakore ese, asi waizviziva here kuti unogona kuisanganisa nemamwe makiyi kuti uite zvimwe zvakawanda? Heano mashoma mapfupi anoshandisa iyo Windows kiyi yekutanga maficha uye maapplication, pamwe nezvimwe zvishoma.
Windows kiyi + A - Vhura iyo Action Center. Izvi zvinoratidzira kana zviziviso pamwe nekukurumidza chiito toggles yeWi-Fi, Bluetooth, Focus Assist, nezvimwe.
Windows anokosha + C -Tangisa Cortana, mubatsiri wedhijitari akavakirwa mukati Windows 10. Unogona kunyora mibvunzo nemimwe mibvunzo kuti uwane rubatsiro kubva kuCortana, kana kugadzirisa Cortana kuti atange kuteerera izwi rako paunoshandisa nzira yekudimbudzira.
Windows anokosha + D - Ratidza kana kuviga desktop. Kuratidza desktop inovanza yako yese yakavhurika windows uye maapplication, uye nekudzvanya nzira yekudimbudzira yekhibhodi zvakare inodzosera iyo windows munzvimbo yavo chaiyo.
Windows anokosha + alt + D - Ratidza nguva uye karenda kubhururuka.
Windows anokosha + E- Vhura File Explorer.
Windows anokosha + F- Tora skrini uye vhura Feedback Hub. Izvi zvinokutendera kuti utumire mhinduro nyore kuMicrosoft nezve dambudziko raungave wakasangana naro.
Windows anokosha + G- Vhura iyo Xbox Game Bar. Izvi zvinokutendera kurekodha mavhidhiyo, kutora skrini, uye kuwana akasiyana maficha uchitamba mutambo.
Windows anokosha + alt + B -Batidza kana kudzima HDR. Izvi zvinoda HDR-inoenderana monitor uye yazvino vhezheni yeXbox Game Bar app.
Windows anokosha + Alt + R-Tanga kurekodha vhidhiyo yeapp yako kana mutambo uchishandisa Xbox Game Bar.
Windows anokosha + H-Tangisa dictation, zvichikubvumidza kuti uise mameseji uchishandisa izwi rako pane kutaipa. Izvi zvinongowanikwa mumitauro yakasarudzwa.
Windows anokosha + I- Vhura iyo Zvirongwa app.
Windows anokosha + Kumbomira - Vhura iyo About peji mune Zvirongwa. Izvi zvinosanganisira ruzivo nezve komputa yako hardware uye Windows pacharo.
Windows anokosha + U - Vhura iyo Accessibility Settings peji.
Windows anokosha + Ctrl + C-Batidza kana kudzima mafirita emavara. Iyi ficha inoda kugoneswa muKuwanikwa zvigadziriso kutanga (mune Ruvara Mafirita tab), uye inokutendera kuti uchinje maratidziro emavara kuti azvidavirire kune akasiyana siyana ehupofu hwemavara.
Windows anokosha + K- Vhura iyo yeBatanidza pane, ichikubvumidza kuti ubatanidze kune isina waya inoratidza inotsigira Miracast, pamwe nemamwe mawaya zvishandiso seBluetooth.
Windows anokosha + L- Kiya PC yako. Izvi zvinochengeta maapuro ako ese akavhurika, asi zvinoda kuti uvhure PC yako usati waashandisa zvakare.
Windows anokosha + M-Deresa yako yese windows.
Windows anokosha + Shift + M- Dzosera yako yakaderedzwa windows. Izvi zvinoshanda chete kana usati wavhura chero windows panguva ino.
Windows anokosha + O- Kiya mudziyo kutaridzika. Kune mahwendefa uye zvinoshandurwa, izvi zvinodzivirira chiratidziro kubva pakutenderera kana uchitenderedza PC yako.
Windows anokosha + P-Shandura modhi yekuratidzira kune akawanda monitors. Kana iwe uine akawanda maratidziro akabatana, unogona kusarudza kushandisa zvidzitiro zvako sewedzero kune mumwe nemumwe, dzokorora, kana kushandisa chete skrini imwe panguva.
Windows anokosha + Ctrl + Q - Vhura Quick Assist. Ichi chishandiso chinokubvumira kupa rubatsiro kune mumwe Windows mushandisi ari kure nekuona skrini yavo kana kutora kutonga kwePC yavo.
Windows anokosha + R- Vhura iyo Run dialog. Izvi zvinokutendera kuti uvhure chero app paPC yako, chero iwe uchiziva zita reexecutable faira reapp.
Windows anokosha + S or Windows anokosha + Q - Vhura Windows Search. Unogona kutsvaga mafaera, mapurogiramu, uye kutsvaga pawebhu pano.
Windows anokosha + kusuduruka + S- Tora skrini uchishandisa Snip & Sketch. Mushure mekudzvanya makiyi, unogona kusarudza yako yaunofarira yekutora modhi, kusanganisira yemahara fomu, rectangle, hwindo, uye yakazara-skrini (izvi zvinosanganisira ese akabatana monitors).
Windows anokosha + V- Vhura yako clipboard nhoroondo. Izvi zvinokutendera kuti uone zvinhu zvakawanda zvawakakopa, kusanganisira zvinyorwa, zvinongedzo, uye mifananidzo. Iyi ficha yakatanga kuremara, asi unogona zvakare kuigonesa muhwindo iri.
Windows anokosha + X- Vhura iyo Kurumidza Link menyu, iyo yakaenzana nekudzvanya-kurudyi icon yekutanga pane yako yebasa. Izvi zvine zvinongedzo kune masisitimu maficha seSettings, File Explorer, Task Manager, nezvimwe.
Windows anokosha + Y(Windows Mixed Reality zvishandiso chete) - Chinja kuisa pakati Windows Yakasanganiswa Reality uye desktop.
Windows + . (nguva) kana ; (semi-colon) - Vhura iyo emoji pani. Izvi zvinokutendera kuti uwedzere emoji kune chero ndima yemavara.
Windows + , (comma) - Tarisa padesktop kwenguva pfupi. Desktop yako inongoonekwa sekureba iwe uchibata imwe yemakiyi mushure mekudzvanya iwo, wozodaro yako windows zvinodzorerwa.
Windows anokosha+ Ctrl + F-Tsvaga maPC panetiweki yako. Izvi zvakagadzirirwa Azure Active Directory domains.
Windows anokosha + nzvimbo bar -Kutenderera pakati pemitauro uye nzira dzekuisa (kana dzakawanda dzakaiswa).
Windows anokosha + kusuduruka + nzvimbo bar -Kutenderera uchidzokera kumashure kuburikidza nerondedzero.
Windows anokosha + Ctrl + nzvimbo bar-Chinja kune yekupedzisira yakashandiswa nzira yekuisa.
Ctrl + kusuduruka -Chinja kune imwe kiyibhodhi dhizaini kana akawanda aripo (yemutauro mumwe chete).
Ctrl + nzvimbo bar -Batidza kana kudzima iyo Chinese IME (kana mutauro wechiChinese wakaiswa).
Windows anokosha + Ctrl+ pinda– Batidza Mutauri. Ichi chinowanika chinoverenga pa-screen zvinhu kuita kuti kufamba kuve nyore kune avo vane kusaona.
Windows anokosha + + (pamwe) - Batidza Magnifier uye zoom muchiratidziro.
Windows anokosha + - (minus) - Zoom kunze neMagnifier.
Windows anokosha + Esc – Vhara Magnifier.
Windows anokosha + / (mberi slash) - Tanga IME kushandura zvakare.
Windows anokosha + Ctrl + kusuduruka + B -Mutsa PC yako kubva pane isina chinhu kana dema skrini.
Windows anokosha + PrtScn (Dhinda Screen, inogona kumiririrwa zvakasiyana pamakiyibhodhi akasiyana) - Tora yakazara-skrini skrini uye wozvichengeta kufaira. Zvinhu zvinochengetwa muraibhurari yeMifananidzo mune folda inonzi Screenshots.
Windows anokosha + Alt+ PrtScn-Tora skrini yemutambo unoshanda kana hwindo uye chengetedza mufaira. Iyi ficha inoshandisa Xbox Game Bar, uye mafaera anochengetwa muVhidhiyo raibhurari, mune folda inonzi Captures (nekudaro).
PrtScn-Tora yakazara-skrini skrini uye woikopa kune clipboard, kuti iwe ugone kunamira kune imwe nzvimbo pasina kuichengeta sefaira. Iwe unogona zvakare kuenda kuSettings app> Kuwanika> Keyboard kuseta PrtScn kiyi yekuvhura Snipping Tool (ichiita kuti ifanane ne Windows anokosha + kusuduruka + S)
Ctrl + Esc - Vhura iyo Start menyu.
Ctrl + (museve) - Resize iyo yekutanga menyu (kana yakavhurwa)
alt + kusuduruka + (museve) - Kana kutariswa kwaiswa kune tirairi paKutanga menyu, fambisa tirairi munzira yemuseve.
Ctrl + kusuduruka + (museve) - Kana kutarisa kwakaiswa kune tile, fambisa iyo mune inotevera tile kuti ugadzire folda.
Ctrl + kusuduruka + Esc - Vhura iyo Task Manager.
Keyboard mapfupi ekuita multitasking uye hwindo manejimendi
Juggling akawanda maapplication uye windows panguva imwe chete inogona kunetsa, uye mbeva haisi iyo inokurumidza nzira yekuwana iyo app yaunoda. Aya mapfupi ekhibhodi anokubatsira kuti uchinje pakati pemaapplication, saizi windows, kana kuarovera padivi pemumwe mukati Windows 10.
Windows anokosha + Tab- Vhura Task View. Izvi zvinotaridza ako ese akavhurika maapuro semataira saka iwe unogona kusarudza imwe yekutarisa pairi. Iyo zvakare inoratidza ako chaiwo desktops uye yako nguva yakatarwa, kusanganisira yaimbove yakavhurwa maapplication uye zvinyorwa.
alt + Tab -Chinja kuhwindo rako rekupedzisira rinoshanda. Press Tab kasingaperi uchibata alt kusarudza hwindo rekuchinja kwariri.
alt + Esc – Kutenderera kuburikidza windows munhevedzano yaakazarurwa nawo.
Ctrl + alt + Tab - Wona ako ese akavhurika maapplication kuti usarudze imwe ine keyboard miseve. Izvi zvakafanana neTask View, asi hazviratidzi madhodhitopu ako uye zvinongoonekwa mune yako yazvino inoshanda yekutarisa.
alt + F4 -Vhara hwindo rinoshanda kana app. Kana ikashandiswa padesktop, izvi zvinovhura iyo Windows Power menu.
Windows anokosha + Museve wekumusoro-Kurisa hwindo rinoshanda saka rinotora desktop yese.
Windows anokosha + Pasi museve-Seta hwindo rinoshanda kune diki saizi kana yakawedzerwa. Viga hwindo mubhara rebasa kana risina kukwidziridzwa.
Windows anokosha + Mutsara weboshwe -Bata hwindo rinoshanda kune hafu yekuruboshwe yechidzitiro.
Windows anokosha + Miseve yakarurama -Bata hwindo rinoshanda kune hafu yekurudyi yechidzitiro.
Kana ukabata pasi Windows anokosha mushure mekutora app kusvika hafu yechidzitiro, unogona kushandisa imwe yemamwe miseve kutora iyo app muchikamu chechina chechidzitiro. Iwe unogona zvakare kudzvanya museve iwoyo kasingaperi kuti ufambe windows kune vatariri vakasiyana (vachiri kutora hafu yechidzitiro).
Windows anokosha + musha -Kuderedza zvese windows kunze kwehwindo rinoshanda. Dzvanya zvakare kuti udzorere iyo yakaderedzwa windows.
Windows anokosha + kusuduruka + Museve wekumusoro -Tambanudza hwindo rinoshanda kuti utore nzvimbo yese yakatwasuka, uchichengeta hupamhi hwakafanana (kune isina-yakawedzerwa windows) Iyo imwe nzira yekudimbudzira ne pasi museve unodzosera kumashure izvi.
Windows anokosha + kusuduruka + Museve wekurudyi or Ruboshwe museve -Fambisa hwindo rinoshanda kune rakasiyana cheki.
Windows anokosha + Ctrl + D -Gadzira nyowani desktop desktop
Windows anokosha + Ctrl + Mutsara weboshwe or Miseve yakarurama -Chinja pakati pematafura desktop kuruboshwe kana kurudyi.
Windows anokosha + Ctrl + F4 -Vhara yazvino virtual desktop. Chero maapplication akavhurwa anoendeswa kune inotevera virtual desktop mumutsara.
File Explorer keyboard mapfupi mukati Windows 10
Iyo File Explorer ndechimwe chezvinhu zvakakosha zve Windows, zvichikubvumidza kuti uone uye ubate mafaera ese akachengetwa paPC yako. Pane mashoma mapfupi aunogona kushandisa kuita kuti chiitiko ichi chive nyore uye nekukurumidza uchishandisa kiibhodhi pane mbeva.
alt + D -Seta kutarisa kune kero bar.
Ctrl + E or Ctrl + F or F3 -Seta kutarisa kune yekutsvaga bar.
Ctrl + N - Vhura hwindo nyowani (inoshandawo mune mamwe mabhurawuza ewebhu)
Ctrl + W -Vhara hwindo rinoshanda (iyi inogona zvakare kushandiswa kuvhara iyo inoshanda tebhu mumabhurawuza).
Ctrl + mbeva yekupuruzira vhiri - Shandura saizi yeforodha uye faira icons. Kukwirisa kumusoro kunoita kuti zvidhori zvikure, kupuruzira pasi kunovaita madiki.
Ctrl + kusuduruka + N -Gadzira folda nyowani.
Ctrl + kusuduruka + E -Inoratidza maforodha ese ari mudhairekitori revabereki yeazvino anoshanda folda (nekuwedzera rondedzero padivi repadivi) kana iyo yazvino folda isina madiki mafolda.
Num kukiya + * (asterisk) kana + (plus) - Ratidza ese maforodha madiki mune yazvino yakasarudzwa dhairekitori pane sidebar.
Num kukiya + - (minus) - Purosa folda yakawedzerwa.
alt + pinda - Tarisa zvivakwa zvefaira rakasarudzwa kana folda.
alt + P - Ratidza preview panel.
alt + Mutsara weboshwe or Backspace -Dzokera peji rimwe (rinoshandawo mune mamwe maapplication senge web browser)
alt + Miseve yakarurama -Enda kumberi peji rimwe (iro rinoshanda mumaapps sewebhu browser)
alt + Museve wekumusoro - Wona iyo mubereki folda yeizvino inoshanda folda.
CTRL + (museve) - Fambisa zvinhu zviri papeji razvino usina kuzvisarudza.
Ctrl + nzvimbo bar -Sarudza zvinhu zvega paunenge uchifamba
kusuduruka + (museve) - Sarudza zvinhu zvakatevedzana kutanga kubva pane yakasarudzwa parizvino. Mumagadzirirwo egidhi, miseve yekukwira nekudzika inosarudza mitsetse yese yezvinhu. Kana ukatanga kufamba uchienda kune rumwe rutivi, chinhu chekupedzisira chakasarudzwa hachina kusarudzwa.
Miseve yakarurama (panavigation sidebar) - Wedzera dhairekitori rakadonha kana chinja kune yekutanga subfolder yeyakawedzera folda.
Mutsara weboshwe -Kupunza dhairekitori rakawedzerwa kana sarudza faira yevabereki yeyakasarudzwa parizvino.
musha -Enda kumusoro kweiyo peji peji (inoshanda mune akasiyana mamwe maapplication).
magumo -Enda kuzasi kweiyo peji peji (inoshandawo mumapurogiramu akawanda).
F2 -Remedza faira rakasarudzwa kana folda.
F4 - Ratidza rondedzero yekero yekero muFaira Explorer.
Zvidimburiko zveKiyibhodhi zvemabhokisi enhaurirano
Dialog boxes idiki windows mapurogiramu anogona dzimwe nguva kugadzira kuratidza menyu sarudzo uye zvigadziriso. Kune mashoma mapfupi ekhibhodi akanyatso kuitirwa mabhokisi enhaurirano, asi anogona kusiana akati wandei zvichienderana nekuoma kwakaita dialog box. Heano mamwe mapfupi ekhibhodi aunogona kushandisa mumabhokisi enhaurirano aya.
F4 or nzvimbo bar- Ratidza zvinhu mune inoshanda yekudonha runyorwa.
Makiyi emiseve -Sarudza bhatani muboka remabhatani kana sarudzo mune runyorwa.
nzvimbo bar -Sarudza kana kusasarudza chinhu chinoshanda kana chiri bhokisi rekutarisa.
Ctrl + Tab -Chinja kuburikidza nematabu akasiyana (inoshandawo mumabhurawuza)
Ctrl + kusuduruka + Tab - Shandura kumashure kuburikidza nematebhu
Tab -Famba kuburikidza nesarudzo pane yazvino peji
kusuduruka + Tab -Enda kumashure kuburikidza nesarudzo dziri papeji razvino.
alt + (tsamba) -Sarudza sarudzo ine tsamba inoenderana neyakadhindwa murondedzero yayo.
Windows 10 mapfupi ebhatani
The taskbar chimwe chikamu chepakati che Windows 10, uye nepo vazhinji vedu taiwanzo pindirana nayo uchishandisa mbeva, unogona kuzviita nemapfupi ekhibhodi. Asi mune zvimwe zviitiko, iwe unogona zvakare kushandisa iyo kiibhodhi semubatsiri kune mbeva kuita zvimwe zviito nekukurumidza.
Windows anokosha + T -Kutenderera kutarisisa kuburikidza nemaapplication ari pabharaki rebasa (rakavhurika kana rakapinwa). Unogona kuvasarudza nekudzvanya Enter.
Windows anokosha + (nhamba) - Tanga iyo app yakanamirwa kubharaki rebasa munzvimbo inoratidzwa nenhamba. Kana iyo app yave kutoshanda, chinja kune iyo app. Kana app ine akati wandei akavhurwa, unogona kubata iyo Windows kiyi uye tinya iyo nhamba zvakare kuti uchinje kune chaiyo chiitiko cheapp.
Windows anokosha + kusuduruka + (nhamba) - Tanga chiitiko chitsva cheapp chakanamirwa kubharaki rebasa munzvimbo inoratidzwa nenhamba, kunyangwe imwe yakatovhurwa.
Windows anokosha + Ctrl + kusuduruka + (nhamba) - Vhura chiitiko chitsva cheapp iri panzvimbo yakapihwa pabhara rebasa semaneja.
Windows anokosha + Ctrl + (nhamba) - Chinja kune yekupedzisira hwindo rinoshanda reapp rakanamirwa kubharaki rebasa munzvimbo inoratidzwa nenhamba.
Windows anokosha + alt + (nhamba) - Vhura iyo Yekusvetuka Rondedzero yeapp yakanamirwa kubharaki rebasa munzvimbo inoratidzwa nenhamba.
kusuduruka + kuruboshwe mbeva tinya - Vhura chiitiko chitsva cheapp yakasarudzwa.
Ctrl + kusuduruka + kuruboshwe mbeva kudzvanya - Vhura iyo yakasarudzwa app semaneja.
kusuduruka + mbeva yekurudyi tinya - Vhura menyu yehwindo yeapp yakasarudzwa
Ctrl + kuruboshwe mbeva kudzvanya (pane app ine akawanda windows vhura) – Kutenderera nepachena windows zve app
Windows kiyi + B - simbisa iyo yekutanga icon munzvimbo yekuzivisa tireyi. Izvi zvinokutendera kuti ufambise zvidhori nemakiyi emiseve uye wozvisarudza neEnter.
General keyboard mapfupi mukati Windows 10
Kupfuura zvakananga Windows 10 maficha, akawanda mapfupi ekhibhodi anowanikwa mukati meiyo sisitimu yekushandisa uye maapplication ayo. Izvi zvinogona kusanganisira zvinhu zvakaita sekukopa mameseji uye zvinhu, mamenu ekufambisa, nezvimwe zvakadaro, asi tsigiro yeaya maficha mumaapp anogona kusiyana.
Ctrl + A -Sarudza zvese zvinyorwa kana zvinhu mugwaro, peji, kana hwindo.
Ctrl + D -Bvisa zvinyorwa zvakasarudzwa kana chinhu (s).
Ctrl + X - Cheka chinhu chakasarudzwa kana chinyorwa.
Ctrl + C- Kopa chinhu chakasarudzwa kana chinyorwa.
Ctrl + V-Namira zvakakopwa kana kucheka zvirimo kubva paclipboard.
Ctrl + Z-Gadzirisa chiito chako chekupedzisira.
Ctrl + Y - Dzokorora chiito chisina kuitwa.
F5 or Ctrl + R -Simudza hwindo rinoshanda kana peji (inoshanda mumapurogiramu akasiyana, kusanganisira mabhurawuza).
Ctrl + F5 - Mune mamwe mabhurawuza ewebhu, izvi zvinozorodza hwindo rinoshanda nekumanikidza bhurawuza kurodha mafaera kunyangwe akambochengetedzwa. Izvi zvinogona kubatsira kana shanduko dzaitwa kune peji asi iwe usingakwanise kuzviona mubrowser yako.
F6 -Kutenderera kuburikidza nescreen zvinhu zvehwindo rinoshanda kana desktop.
F10 -Shandisa iyo menyu bar muhwindo rinoshanda kana app.
alt + F8 - Ratidza password yako pane Windows kusaina-mukati skrini
alt + (tsamba) - Kana mamenu ari kuratidzwa, sarudza sarudzo ine inoenderana nemavara akadhindwa muzvinyorwa.
alt + nzvimbo bar - Vhura menyu yekudimbudzira yehwindo rinoshanda.
kusuduruka + F10 - Vhura iyo nzira yekudimbudzira / yemukati menyu yechinhu chakasarudzwa.
Mutsara weboshwe (mumamenyu) - Fambisa kuruboshwe pane menyu, kana kuvhara yakavhurika sub-menu.
Miseve yakarurama (mumamenu) - Enda kurudyi pane menyu, kana kuvhura yakasarudzwa sub-menu.
Ctrl + F4 -Vhara gwaro rakavhurika kana tebhu mumaapps anotendera iwe kuvhura akawanda magwaro kana ma tabo kamwechete, senge web browser.
Ctrl + E - Vhura kutsvaga (mune mamwe maapplication).
Ctrl + Miseve yakarurama -Mugwaro, fambisa chinyorwa chemavara kune kutanga kwezwi rinotevera.
Ctrl + Mutsara weboshwe -Fambisa chitubu chemavara pakutanga kweizwi rapfuura.
Ctrl + Museve wekumusoro -Mugwaro, fambisa chinyorwa chemavara kumusoro kwendima imwe.
Ctrl + Pasi museve -Fambisa chinyorwa chemavara pasi ndima imwe.
alt + kusuduruka + (museve kiyi) - Kana yakatarisa yaiswa kune yakapinirwa app muKutanga menyu, fambisa iyo yakadhindwa app yakananga kumuseve.
kusuduruka + (museve kiyi) - Mugwaro, sarudza mameseji kubva pachinzvimbo chechinyorwa chemavara.
Mutsara weboshwe -Sarudza hunhu hwapfuura. Museve wekurudyi unobvisa mavara ekupedzisira akasarudzwa.
Miseve yakarurama -Sarudza anotevera hunhu. Museve wekuruboshwe unobvisa mavara ekupedzisira akasarudzwa.
Museve wekumusoro -Sarudza mutsara wapfuura. Museve wepasi unobvisa mutsara wekupedzisira wasarudzwa.
Pasi museve -Sarudza mutsara unotevera. Museve wekumusoro unobvisa mutsara wekupedzisira wakasarudzwa.
Ctrl + kusuduruka + (kiyi yemuseve) - Mugwaro, sarudza block yemavara kubva pachinzvimbo chechitubu:
Mutsara weboshwe -Sarudza izwi rapfuura. Museve wekurudyi unobvisa mavara ekupedzisira akasarudzwa.
Miseve yakarurama -Sarudza izwi rinotevera. Museve wekuruboshwe unobvisa mavara ekupedzisira akasarudzwa.
Museve wekumusoro -Sarudza ndima yapfuura. Museve wepasi unobvisa pandima yekupedzisira yakasarudzwa.
Pasi museve -Sarudza ndima inotevera. Museve wekumusoro unobvisa pandima yekupedzisira yakasarudzwa.
Esc -Misa kana kusiya basa rinoenderera (kushandiswa kunosiyana neapp).
Uye izvi Windows 10 keyboard mapfupi ari muruoko, unogona kuzviwana iwe kiyibhodhi yako kupfuura mbeva yako munguva pfupi. Masikirwo ekutanga angangove naakawanda ndeekuti izvi hazvisi senge intuitive, asi zvinogona kuva nemubairo mukuru kudzidza ese aya mapfupi, sezvo achikuchengetedza nguva yakawanda mukufamba kwenguva. Kune mamwe mapfupi aya, kunyanya iwo akavakirwa pane Windows key, Microsoft's PowerToys software inosanganisira chishandiso chinonzi Shortcut Guide. Unogona kubata pasi Windows kiyi yekuona ese mapfupi anowanikwa pairi.
Windows 10 ichiri iyo inonyanya kushandiswa sisitimu yekushandisa kunze uko, asi kana iwe wakakwidziridza kuti Windows 11, tine gwara re Windows 11 mapfupi ekhibhodi, zvakare. Mazhinji acho akafanana kune ese ari maviri masisitimu anoshanda, asi mashoma achinja, uye Windows 11 ine zvishoma zvitsva, zvakare. Tarisa zvedu Windows 11 kuongorora kana iwe uchida kuziva kuti unofanira kusimudzira here kana kuti kwete.
The post Izvi ndizvo zvese Windows 10 keyboard mapfupi aunoda kuziva yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Yakanakisisa yemitambo kiredhi 2020: Yakanakisa yakanyarara, yakakura, ine ruvara uye inodada machina makadhibhodi kutenderera
Acer Chinja 5 SW512-52 ongororo - inokurumidza, isina fan fan uye inodhura Windows piritsi
Iyo yekupedzisira inotungamira yekugadzirisa matambudziko neMay 2020 Kuwedzeredza
Samsung Galaxy S20 matipi uye manomano: Iyo yemukati gwara kune iyo S20, S20 + uye S20 Ultra
Samsung Galaxy S20 matipi uye manomano: Iyo gwara remukati kune iyo S20FE, S20, S20 + uye S20 Ultra
Samsung Galaxy S22 matipi uye matipi: Tenzi iyo S22, S22+, S22 Ultra
Yakanakisa iPhone 8, 7, 6 uye SE matipi uye mateki: Wana zvakawanda kubva kuTouch ID yako iPhone